ဆွီဒင်ဆေးခန်းများ၏လူသတ်မှုများအတွက်အ | Apg29
ငါကိုမှန်ကန်စွာနားလည်လိုလျှင်သင် unplanned တစ်စုံတစ်ဦးကိုသတ်လျှင်လူသတ်မှုစီစဉ်ထားနေစဉ်ကလူသတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစီစဉ်ကတည်းကပါကလူသတ်မှုပေမယ့်ဘာမျှမပါ!
ကျနော်တို့ရိုးရိုးသားသားဖြစ်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ကြောင်းကိုဝန်ခံရမယ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာလူသတ်မှု လူငယ်တစ်ဦးသည်သူငယ်၏။ ဟောင်းတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆရာဝန်၏ဤခိုင်မာတဲ့နှင့်ပှငျ့လငျးစှာပွောဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ။ သူကတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖျော်ဖြေရပ်တန်ဘယ်လိုထိတ်လန်ပြောပြသည်။ သူက 1200 ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအတွက်ပြုသမျှအတိုင်း။ ထို့ကြောင့် 1200 ကလူအသတ်ခံ!
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း, သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးအပြစ်မဲ့လူကိုသတ်မှုအပြင်, စတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမာက်စ်ဝါဒီလူ့အဖွဲ့အစည်း, မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံဖြိုဖျက်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖွတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ပျော်ဖို့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
2 တောလ 21: 22-23 သူတို့အားသတိမဲ့မှတစ်ဆင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အစောပိုင်း၌မွေးဖွားပေးသည်မရှိ, မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လျှင်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကလေးကအသေခံ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုအင်အားသုံးအဘို့အသက်တာ၏ပညတ္တိကျမ်း။
ယောက်ျားအချင်းချင်းစစ်တိုက်ခြင်းငှါ လာ. , သူမရဲ့သန္ဓေသားကိုတက်ပေးသည်ဒါကြောင့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးကလေးနဲ့အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့ bumps, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြားမတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ပါလျှင်သူကအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းကသူ့ကိုချမှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ဒဏ်ငွေနှင့်ခုံသမာဓိရုံးရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်။ မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်လျှင်မူကား, ဘဝအသက်အဘို့ခံရကြ,
2 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 21: 22-23
ဒါဟာကလေး၏ဘဝနှင့်ကျန်းမာရေးပညတ်တရားအောက်၌ကာကွယ်မှုရှိသည်နှစ်ခုစလုံးမိခင်သောအခြေအနေတွင်ထံမှရှင်းပါတယ်။ အဆိုပါမွေးသေးသောကလေး၏သေစေ, တကolvckshändelseဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပင်, ဣသရေလအမျိုး၌အသေခံခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပညတ်တရား၏အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရဘယ်လောက်ထက်ပိုသောစင်ကြယ်သောအချိန်ကာလသတ်မှတ်လူသတ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ယခုတွင်သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်လည်းမရှိ။ ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုခစျြနှငျ့သငျသညျယရှေုကိုလက်မခံဖို့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်လိုသည်။ ယရှေုသညျသင်၏အပြစ်များအတွက်အသေခံ, သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံဘဲဘုရားသခငျ၏တတိယနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်ခံခဲ့ရသည်။ ယရှေုသညျယနေ့အသကျရှငျနဲ့ဒါသငျသညျကိုယျတျောလကျခံနိုင်ပြီးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့် - သင်ပြုသောအမှုဖွင့်အဘယျသို့တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်း,
လာကြ, အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းပြချက်ပါစေ, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ သင်တို့အပြစ်သည်နီသောအဖြစ်သော်လည်း, သူတို့သည်ဆီးနှင်းကဲ့သို့ဖြူရလိမ့်မည်သူတို့ကကတ္တီပါနီနှင့်အမျှနီသော်လည်း, သူတို့သည်သိုးမွှေးကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။
Thoralf Gilbrant စာမျက်နှာ 97 ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို